Ukufunda kuyisihluthulelo | I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Ukufunda kuyisihluthulelo
Ukuqonda ukuqonda kuyisihluthulelo sokuqonda ukuthi kungani izithombe ezingcolile ze-intanethi zingaba yinkinga yempilo yengqondo nengokwenyama. Kulesi sigaba I-Reward Foundation ibheka ukufunda kusuka emazingeni ahlukahlukene ahlukene.
Ucwaningo ikhombisa ukuthi izithombe zobulili ezingcolile ezivamile zisebenzisa okuhlobene 'ne-causally' kubantu abasha abanesilinganiso esiphakeme ukuphuza ukuphumula. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi bezithombe zobulili ezingcolile abakwazi ukubambezela ukwaneliseka ngokushesha ukuthola umvuzo obaluleke kakhulu kamuva, njengokuphumelela kokuhlolwa. Amakolishi namayunivesithi abika amanani aphezulu abafundi abashiya phakathi i-UK nakwezinye izindawo.
Yiziphi ezinye izinhlobonhlobo zalokhu kunciphisa? Isazi sengqondo sengqondo uRoy Baumeister encwadini yakhe Ukuzikhandla ithi iningi lezinkinga ezinkulu, ezomuntu nezenhlalo, zigxile ekwehlulekeni kokuzithiba. Kulokho okwaba elinye lamaphepha acashunwe kunawo wonke ezincwadini zesayensi yezenhlalo, uBaumeister wathola ukuthi amandla empeleni asebenza njengesihlunu: angaqiniswa ngokuzijwayeza futhi adinwe ukusetshenziswa ngokweqile. Amandla akhuthazwa yi-glucose, futhi angaqiniswa ngokumane agcwalise isitolo sobuchopho sikaphethiloli. Yingakho ukudla nokulala — futhi ikakhulukazi ukwehluleka ukwenza okunye kwalokhu — kunemiphumela emikhulu kangaka ekuzibambeni (futhi kungani ama-dieters enenkinga enzima kangaka yokumelana nesilingo).
UProfesa waseStanford University uFilippi Zimbardo uchaza 'ukulimala kokuvusa' nokunciphisa impumelelo yezifundo kule nkulumo, I-Demise of Guys?
Lesi sigaba sinikeza izinsiza ezihlokweni ezilandelayo:
• Imemori nokuFunda
• Isimo socansi
• Izithombe Zobulili Ezingcolile Nezokuqala
• Ukulutha kwe-intanethi
Siphinde sinikeze ububanzi bezinsiza ukuze sisekele ukuqonda kwakho ngalezi zinkinga.